OroCoin စျေး - အွန်လိုင်း ORO ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို OroCoin (ORO)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ OroCoin (ORO) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ OroCoin ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ OroCoin တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
OroCoin များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
OroCoinORO သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.014OroCoinORO သို့ ယူရိုEUR€0.0118OroCoinORO သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.0107OroCoinORO သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.0127OroCoinORO သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr0.124OroCoinORO သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.0.0881OroCoinORO သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč0.309OroCoinORO သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.052OroCoinORO သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.0185OroCoinORO သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.0196OroCoinORO သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$0.31OroCoinORO သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$0.108OroCoinORO သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$0.075OroCoinORO သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹1.05OroCoinORO သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.2.36OroCoinORO သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.0192OroCoinORO သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.0214OroCoinORO သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿0.434OroCoinORO သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥0.0971OroCoinORO သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥1.49OroCoinORO သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩16.57OroCoinORO သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦5.42OroCoinORO သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽1.02OroCoinORO သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴0.384
OroCoinORO သို့ BitcoinBTC0.000001 OroCoinORO သို့ EthereumETH0.00004 OroCoinORO သို့ LitecoinLTC0.000257 OroCoinORO သို့ DigitalCashDASH0.000154 OroCoinORO သို့ MoneroXMR0.000157 OroCoinORO သို့ NxtNXT1.09 OroCoinORO သို့ Ethereum ClassicETC0.00206 OroCoinORO သို့ DogecoinDOGE4.03 OroCoinORO သို့ ZCashZEC0.00017 OroCoinORO သို့ BitsharesBTS0.431 OroCoinORO သို့ DigiByteDGB0.447 OroCoinORO သို့ RippleXRP0.0496 OroCoinORO သို့ BitcoinDarkBTCD0.000482 OroCoinORO သို့ PeerCoinPPC0.0464 OroCoinORO သို့ CraigsCoinCRAIG6.37 OroCoinORO သို့ BitstakeXBS0.596 OroCoinORO သို့ PayCoinXPY0.244 OroCoinORO သို့ ProsperCoinPRC1.75 OroCoinORO သို့ YbCoinYBC0.000008 OroCoinORO သို့ DarkKushDANK4.49 OroCoinORO သို့ GiveCoinGIVE30.28 OroCoinORO သို့ KoboCoinKOBO3.18 OroCoinORO သို့ DarkTokenDT0.0129 OroCoinORO သို့ CETUS CoinCETI40.37